वेदले भन्छ : पशु हैन अहंकारको बलि देऊ | Himalaya Post
Posted by Himalaya Post | २७ आश्विन २०७८, बुधबार १५:३५ |
विश्वभरि नै शान्ति र अहिंसाको ज्योति फैलाउने भगवान् गौतम बुद्धको देशमा कतिपय धार्मिक, सांस्कृतिक र परम्परागत संस्कार हिंसामुखी छन् । प्राचीनकालमा धर्मका नाममा नर बलि दिईन्थ्यो । यसलाई नरमेध यज्ञ भनिन्थ्यो । यज्ञमा पशु र मानिसलाई चढाईन्थ्यो । घोडा र गाइको समेत बलि दिइन्थ्यो र ‘अश्वमेध यज्ञ’ र ‘गोमेध यज्ञ’ भनिन्थ्यो ।
जीवबाटै जीवको अस्तीत्व रहन्छ भन्ने हाम्रो पूर्वीय मान्यता छ । अर्थात यो चराचर जगतमा एक जीवले अर्को जीवलाई मारेर मात्र बाँच्नसक्छ । पक्कै, प्रकृतिमा यो सार्वभौम नियम लागू भइरहेकै छ । तर, मानिस भनेको चेतनशील र विवेक भएको प्राणी हो । यसले हिंसा नगरीकन पनि आफ्नो प्राण रक्षा गर्नसक्छ ।
हुन त प्राणी र वनस्पति दुवै जीव हुन् । तर, कम्तीमा मानिसले प्राणी हिंसा नगरीकनै अन्न पातबाट आफ्नो गुजारा गर्नसक्छ, यसबाट चेतनशील प्राणी हिंसा कम हुन्छ । हिंसा एकखालको भनोभाव पनि हो, यो मांसाहारमा मात्र सिमित छैन । हिंसा भावले समग्र समाजकै मैत्री र प्रेम भाव खण्डित गर्छ । अतः भगवान बुद्ध, महात्मा गान्धी, महाविर आदिले अहिंसामा जोड दिए ।
भगवान बुद्धले बलि प्रथालाई निरुत्साहित गरेपछि पशु र नरबलि प्रथामा कमी आउँदै गयो । समय क्रममा फेरी धर्मका नाममा पशुबलि दिने चलन सुरु भयो । खासगरी मांसाहार गर्नका लागि पशुबलिलाई धार्मिक आवरण ओढाईयो ।
जुन देशमा देवादीदेव महादेव अर्थात् बाबा पशुपतिनाथ छन् त्यही देशमा हामीले पशुबलिको विभत्स रूप देख्नु परिरहेको छ । एकातिर हामी तिहारमा गाई र कुकुरको पूजा गरेर पशुलाई आदर र माया गरेको देखाउँछौं भने अर्कोतिर दशैंलगायतका पर्वहरूमा हामी कुखुरा, खसी, बोका, राँगाको बलि दिन पछि पर्दैनौं । असत्यमाथि सत्यको विजयको खुशीयाली वा दुर्गा भवानीले राक्षसहरूको वध गरेको उत्सवका रुपमा पशुबलि दिने चलन चलाउँछौं ।
दसैंको नवरथाका दिनदेखि नै अधिकांश देवीका मन्दिर, शक्तिपीठमा कुखुरा, बोका, हाँस, राँगालगायतका पशुबलि दिईन्छ । पवित्र मन्दिरमा रगतको खोलो बग्छ । हामो राष्ट्रिय गीतले भने झैं ‘ज्ञान भूमि, शान्ति भूमि’ नेपालमा धर्मका नाममा पशुबलि हुनु संगतपूर्ण हुँदै होईन । पृथ्वीमा रहेका मानिसलगायत सबै जीवजन्तु र पशुपंक्षी प्रकृतिका अनुपम उपहार हुन । सृष्टिका अमूल्य रचना हुन, मानिसलाई जस्तै पृथ्वीमा हरेक प्राणीलाई बाँच्न पाउने समान अधिकार छ ।
जैविक विविधताका दृष्टिले पनि पृथ्वीमा हरेक जीवको उत्तिकै महत्व छ । पशुपंक्षीका कारण हाम्रो खेतीपाती र पर्यावरण चक्रको सन्तुलनमा समेत सकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । ती पशुबाट किसानले प्रांगारिक मल प्राप्त गर्न सक्छन् । पशुबलिले एकातिर पृथ्वीको जैविक सन्तुलन खलबल्याईरहेको छ भने पशुबलिकै कारण समाजमा मनोवैज्ञानिक रुपमा हिंसा फैलिएको छ ।
कतै करेन्ट लगाएर, कतै हलाल गरेर त कतै मार हानेर पशु पंक्षीको वध गर्ने गरिन्छ । त्यसरी अरुलाई दुःख र कष्ट दिनु धर्म होइन । जीवलाई मारेर धर्म हुँदैन । विवेकशील मानिसले मत्स्य न्याय झैं कमजोर र अवोध पशुलाई धर्मका नाममा मार्न सुहाउँदैन । कुनै पनि धार्मिक ग्रन्थमा पशुलाई बलि दिएर पुण्य हुने तथ्य उल्लेख छैन ।
हिन्दु धर्मका असली अनुयायीका अनुसार बलि भनेको नैवेद बलि मात्र हो, पशुबलि हैन । वेदमा विद्यावारीधि गर्नु भएका स्वामी डा. प्रपन्नचार्यले पनि ‘बलि भनेको नैवेद अर्पण गर्ने मात्र हो’ भन्दै आउनुयो र बहुबलीको विरोध गर्नुभयो । तर हामीकहाँ मांसाहारी पण्डितहरूले बलिप्रथा स्थापित गर्न धार्मिक लेपन लगाए । खासमा शक्तिरुपा दुर्गाको नाममा बलि दिने संस्कार मूल वेदवाट निर्देशित नै छैन । चण्डिमा पनि कँहिकतै दुर्गा भवानीलाई बलिसँग जोडेर व्याख्या गरिएको छैन । दुर्गा भवानी स्वयंले पनि रक्त वीर्यको रगत भूँईमा खस्न दिएकी थिईनन् भन्ने वर्णन पौराणिक ग्रन्थहरूमा पाईन्छ ।
भारतका सदगुरु ओशो सिद्यार्थले भनेका छन्, ‘अस्तित्व बलि प्रथा स्वीकार गर्दैन । भारत, खासगरी राजस्थानका राजा महाराजाहरु बलि प्रथाका पोषक थिए । त्यसैले भारतमा एक हजार सालसम्म गुलाम रह्यो । नेपालमा राजवंशको नाश र पछि समाप्ति पनि बलिप्रथाकै कारण भयो । नेपालको अहिलेको गणतान्त्रिक सरकार यदि धर्मका नाममा चलिरहेको बलि प्रथालाई रोक्दैन भने नेपालको उज्जवल भविश्यको आशा गर्न सकिदैन ।’
पाल्पाको भैरवथान, गोरखाको मनकामना, वीरगंजको गहवामाई, सप्तरीको छिन्नमस्ता, राजविराजको राजदेवी, डडेल्धुराको उग्रतारा, काभ्रेको पलाञ्चोक भगवती, गोरखाको गोरखकाली, नुवाकोटको भैरवी, डोटीको शैलेश्वरी, धरानको दन्तकाली, भोजपुरको शिद्धकालीलगायतका मन्दिरमा पनि शक्तिरुपा भगवतीको पूजा अर्चनाका नाममा पशुबलि दिईन्छ । ती ऐतिहासीक मन्दिरहरूलाई पनि पशुबलि मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्छ ।
बाराको बरियारपुरमा हरेक पाँच वर्षको अन्तरालमा मंसिर महिनामा आयोजना हुने गढीमाई मेलामा पाँच लाख भन्दा बढी पशुपंक्षीको बलि दिईन्छ । यो पशुप्रतिको क्रुर व्यवहार हो । गढीमाई मेला पशुपंक्षी बलिका दृष्टीले संसारकै सबैभन्दा ठुलो बलि हो, जहाँ २५ हजार राँगासहित पाँच लाख पशुको निर्ममतापूर्वक बलि दिइन्छ । त्यसमा मुसा, हाँस र कुखुरासमेत पर्दछन ।
अहिलेका पुजारीका कुनै पुर्खालाई सपनामा कसैले ‘देवीलाई बलि दिनुपर्छ’ भनेपछि सपनाकै आधारमा यस्तो बलिको सुरुवात भएको बताइन्छ । सपनाकै भरमा अबोध पशुमाथि धर्मकै आडमा त्यस्तो क्रुर व्यवहार गर्नु अहिलेको एक्काइसौं शताब्दीको मानवलाई कदापि सुहाउँदैन । गढीमाई मेलामा हुने पशुबलिको विरुद्धमा संसारभरिका पशुअधिकारकर्मी, पशुमाथि मानवीय व्यवहारका पक्षपाती तथा सत्य, धर्म, अहिंसा र करुणाका संवाहक विभिन्न आध्यात्मिक संघ संस्थाले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
गढीमाईको कहालीलाग्दो पशुबलिको विरोधमा भारतकी अधिकारकर्मी मेनका गान्धीलेसमेत पहल गरेकी थिइन । मेनकाले केही वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पत्र लेखेर त्यो क्रुुर पशुबलि रोक्न आग्रह गरेकी थिईन । तर पशुबलि रोकियोस भन्ने पुकारको सरकारले कुनै सुनुवाई गरेन । बरु गढीमाई मेलाका लागि सरकारले लाखौं रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अवदेखि गढीमाई मेलामा हुने भयावह पशुबलिमाथि रोक लगाउन सरकारले ऐतिहासिक निर्णय गर्नैपर्छ ।
मुगुको गमगढीमा बडादशैंको अवसरमा दिईने पशुबलि पनि क्रुरताको पराकाष्ठा हो । त्यहाँ एकथरी युवा हर्षका साथ बोको लिएर मन्दिरको प्रांगणमा आउँछन् । डोरी खोल्नुभन्दा पहिले बोकाको जिउभरी खुर्सानीको लेप घस्छन् । पिरोको डाहाले बोको छटपटाउँछ, तडपिन्छ, करुण क्रन्दन गर्छ । बोका छटपटाईरहेकै बेला ति युवा बोकालाई दाँतले टोक्न थाल्छन् । कसको टोकाईबाट बोकाको भुँडी फुटाउन सकिन्छ भन्ने होडवाजी चल्छ । अन्ततः धेरैले टोकेपछि बोकाको भुँडी बाहिर निस्कन्छ । युवा उत्सव मनाउन थाल्छन् । मानवले गर्ने त्यस्तो दानवीय व्यवहारमाथि रोक लगाइनुपर्छ ।
सबैभन्दा असहय र दुखलाग्दो अवस्था, सरकारले जनताले तिरेको करबाट संकलित सरकारी ढुकुटीबाट करोडौं रुपैयाँ पशुबलिको लागि बजेट छुट्याउने गरेको छ । माछामासु खाने र पशुबलिका पक्षपातीलाई यो कुरा जायज लाग्न पनि सक्ला । तर, करोडौं नेपाली जनता जो शाकाहारी छन् र पशुबलिको पक्षमा छैनन्, उनिहरूले यो देश उन्नतिको लागि तिरेको नियमित कर पशुबलिमा जाँदा उनीहरूको मौलिक हक अधिकारमाथि कुठाराघात हुदैन र ?
कसैको खुशीको लागि अरु कसैमाथि अन्याय हुनुहुँदैन । ती जनताले हामीले तिरेको कर र राज्यको ढुकुटीबाट खर्च हुने राजस्व दुरुपयोग गरी पशुबलि र पापमा हामीलाई मुछ्न पाईदैन भनेर भन्न पाउने कि नपाउने ? सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत दशैंको उपलक्ष्यमा राज्यकोषबाटै पशुबलिका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च छुट्याउने र राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने चलन बन्द हुनुपर्छ ।
धर्मले पशुपंक्षी र मानिसलाई समान मान्छ । बलि दिइने पशु पनि देवीकै सन्तान हुन् । आफ्नै आमालाई सन्तानको बलि किन दिने ? यदि देवीलाई बलि दिएर खुशी पार्नु नै छ भने किन काँक्रा, फर्सी, लौका, इस्कुस र नरीवलको बली नदिने ? त्यसैले पशुबलिको साटो फलफूल र तरकारीको बलि दिने संस्कार बसाउन सरकारले जनचेतनामूलक ठोस कार्यक्रम ल्याओस् ।
वैज्ञानिक हिसाबले र स्वभावैले पनि मानिस मांसाहारी वर्गमा पर्दैन । स्वास्थ्यका हरेक दृष्टिले मासु खानु हानिकारक भएको पुष्टि भइसकेको छ । नेपालवाहेक आज संसारका विकसित, अल्पविकसित तथा अविकसित मुलुकमासमेत पशु अधिकारलाई कानूनमै सुरक्षित गरिएको छ । मासुको रुपमा प्रयोग गरिने पशुलाईसमेत एकदमै व्यवस्थित वधशाला निर्माण गरि वध गर्ने गरिएका छन् । हाम्रै छिमेकी देश चीन र भारतमासमेत देवी देवताको मठ मन्दिरमा निर्दोष प्राणीलाई बलि दिने कुरीतिलाई निरुत्साहित गरिएको छ । तर, भौगोलिक हिसाबले यति सानो मुलुक नेपालमा निरिह प्राणी पशुलाई बलिदिने गणितिय क्रम हिसाब गर्‍यौँ भने कहाली लागेर आत्तिन्छौं । त्यसैले धर्मका नाममा हुने पशुबध रोक्न सरकारले तत्काल कानुनी व्यवस्था गरोस् ।
मानिसले पशुको होइन, आफूभित्रको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारलाई बलि दिनु आवश्यक छ । संसारभरिका सबै धर्मको सार नै यही हो । दुर्गा भवानीले महिषासुरको बध गरेको खुशीयालीमा यदि कसैको बलि दिएर उत्सव मनाउने नै हो भने आफूभित्रैका षडरिपुहरूको बली दिएर उत्सव मनाऔं ।
खासमा महिषासुर भनेका तिनै षडरिपु हुन । निरिह, निरुपाय, निर्दोष र अवोध प्राणीको निर्मम वध गर्नुको साटो हामीले आफूभित्रको महिषासुर प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले आध्यात्मिक जागरणको पहल गरोस् । सत्य, धर्म, अहिंसा, करुणा, प्रेम र आनन्दतर्फ जनतालाई अग्रसर गराउन सकियो भने मात्र मुलुकले चाहेको दिगो शान्ति स्थापना हुनसक्दछ ।
Previousराष्ट्रपतिद्वारा पलाञ्चोक भगवतीको दर्शन (तस्बिर)
Nextपौरखी किसानलाई हेर्दैन सरकार
चीनद्वारा भारतसँगको सैन्य झडपमा कमान्डिङ अफिसरसहित दुई सैन्य अधिकारी मारिएको स्वीकार
१० असार २०७७, बुधबार १७:३०
पशुपतिनाथमा विशेष पूजा गराउनेको आकर्षण बढ्दो
४ चैत्र २०७७, बुधबार १३:५१
काङ्ग्रेस जिल्ला सभापतिहरुको बैठक : ३८ बुँदे घोषणा पत्र जारी, निर्मलाको न्यायका निम्ति माग
१८ चैत्र २०७६, मंगलवार ०६:४५